पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ चैत्र १८ गते (सन् २०२१ मार्च ३१ तारिख) बुधबार - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
होमपेज धर्म/संस्कृति पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ चैत्र १८ गते (सन् २०२१ मार्च ३१...
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ चैत्र १८ गते (सन् २०२१ मार्च ३१ तारिख) बुधबार
पुर्पुरोमा जे लेखिए पनि भाग्यसँगै कर्म गरौं । यतिखेर समुदायस्तरमै कोरोना भाइरस छँदैछ । यसका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड र सामाजिक दुरी कायम गर्नु नै पर्छ । फेरी हाम्रो सामु अर्को महामारी वातावरण प्रदुषण पनि थपिएको हुँदा यसबाट बच्न सँधैभरि माक्र्सको प्रयोग गर्नु अनिवार्य छ । विभिन्न पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सरोकारवालहरुले कोरोनाको प्रभावबाट बच्न विभिन्न सन्देशमूलक सूचना, स्वास्थ्यमापदण्ड तथा सचेतनालाई कार्यान्वयन गरौं । नडराऔं सजगता अपनाऔं । आफू सुरक्षित रहौं र अरुलाई पनि सुरक्षित बनाऔं ।
मेष – सुख समृद्धि बढ्ला । मान पुरस्कार प्राप्त होला । आर्थिक कार्यमा अनुकूलता रहला । पारिवारिक सौहाद्र्ध बढ्नेछ । साझेदारीको काम बढ्नेछ । लगानी उठ्ला । कार्यव्यापारमा सफलता मिल्नेछ । बस्तुसित सम्बन्धित काममा सफलता मिल्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । पारिवारिक सुख समृद्धि हासिल हुनेछ ।
कर्कट – भागदौड भैरहला । कठोर परिश्रमले समस्याको समाधान मिल्नेछ । नियमकानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ला । इष्टमित्रको सहयोग प्राप्त होला । विजयश्री मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ला । ऋण रोग र शत्रुलाई उपेक्षा गर्नु उचित हुने छैन ।
सिंह – ग्रहगोचर शुभ फलदायक रहला । धन सम्पत्ति मान महत्व बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नेछ । सुख आनन्दमा आकर्षण बढ्ला । पारिवारिक सुख बढ्ला ।
वृश्चिक – हांसविलासमा रुचि बढ्ला । कठोर परिश्रमले मनोकूलको काम बन्नेछ । वार्तामा सफलता पाउनु हुनेछ । धन सम्पत्ति बढ्नेछ तर अत्यन्तै बढी प्रयास र प्रयत्नले । विवादमा पर्नु र अरुको भरमा बस्नु उचित हुने छैन । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ला । आशा उत्साह बढ्नेछ ।
मकर – अन्नधन बढ्नेछ । सुख आनन्द बढ्ला । आयस्रोत बढ्ला । रोकिएको धन प्राप्त होला । दूर देशबाट शुभ समाचार प्राप्त होला । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । मान सम्मान बढ्नेछ । पारिवारिक सुख शानित बढ्नेछ ।
मीन – प्रेममा सफलता मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्लान् । दूरदेशको यात्रा होला । हासविलासमा रुचि बढ्नेछ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । यश वर्चश्वमा वृद्धि होला । ख्याति फैलिनेछ । मान पुरस्कार प्राप्त होला । आँट उत्साह बढ्नेछ ।
अघिको समचार नेकपा एमालेमा कारवाही प्रक्रिया : कारवाहीका लागि मिति पुरानो, निर्णय नयाँ
अर्को समचार राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी बीच एकता हुने